China Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Liming Bio
ဤအလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်၊ အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်သော PCR အစုံကို ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွက် lyophilized ဖော်မတ် (အေးခဲ-အခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်) ဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ကိရိယာကို အခန်းအပူချိန်တွင် သယ်ယူ သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာ တည်ငြိမ်သည်။အကြိုဖျော်စပ်သည့်ပြွန်တစ်ခုစီတွင် Reverse-transcriptase၊ Taq polymerase၊ primers၊ probes နှင့် dNTPs substrates အပါအဝင် PCR amplification အတွက် လိုအပ်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။၎င်းသည် 13ul ပေါင်းခံရေနှင့် 5ul ထုတ်ယူထားသော RNA ပုံစံခွက်ကို ပေါင်းထည့်ရန်သာ လိုအပ်ပြီး ၎င်းကို PCR တူရိယာများတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး ချဲ့နိုင်သည်။
qPCR စက်သည် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်-
1. Fit 8 strip PCR tube ထုထည် 0.2 ml
2. ထောက်လှမ်းနိုင်သောလမ်းကြောင်း လေးခုထက်ပို၍ ရှိသည်-
FAM၊ SYBR Green I
VIC၊ HEX၊ TET၊ JOE
ROX၊ TEXAS အနီရောင်
7500Real-Time PCR စနစ်၊ Biorad CF96၊ iCycler iQ™ Real-Time PCR Detection System၊ Stratagene Mx3000P၊ Mx3005P
Novel Coronavirus nucleic acid detection reagent ၏အအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ
သမားရိုးကျ နျူကလိစ်အက်ဆစ် ထောက်လှမ်းသည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများကို အကွာအဝေးတွင် သယ်ယူသည့်အခါ၊ ဓာတုပစ္စည်းများအတွင်းရှိ အင်ဇိုင်း၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ဆက်လက်တက်ကြွနေစေရန်အတွက် (-20±5) ℃ အအေးကွင်းဆက် သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်သည်။အပူချိန်စံနှုန်းပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် နူကလိစ်အက်ဆစ်စမ်းသပ်မှု ဓါတ်ဆေးတစ်ဗူးစီအတွက် ရေခဲခြောက်ကီလိုဂရမ် အများအပြား လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် နှစ်ရက် သို့မဟုတ် သုံးရက်သာ ကြာရှည်နိုင်သည်။စက်မှုလက်တွေ့ ရှုထောင့်အရ၊ ထုတ်လုပ်သူမှ ထုတ်ပေးသော ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ အမှန်တကယ် အလေးချိန်သည် ကွန်တိန်နာ၏ 10% (သို့မဟုတ် ဤတန်ဖိုးထက်နည်းသည်) ထက်နည်းပါသည်။အလေးချိန်အများစုသည် ရေခဲခြောက်များ၊ ရေခဲထုပ်များနှင့် အမြှုပ်သေတ္တာများမှ လာသောကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်သည် အလွန်မြင့်မားသည်။
2020 ခုနှစ် မတ်လတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် COVID-19 သည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Novel Coronavirus nucleic acid detection reagent ၏ လိုအပ်ချက်သည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။အအေးကွင်းဆက်ရှိ ဓာတ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသော်လည်း ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ပမာဏများပြားပြီး အမြတ်များသောကြောင့် ၎င်းကို လက်ခံနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် အမျိုးသားပို့ကုန်မူဝါဒများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုအပြင် လူနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုအပေါ် အမျိုးသားထိန်းချုပ်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အတူ ဓာတ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်ကို သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် မသေချာမရေရာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထင်ရှားသော ထုတ်ကုန်ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်။တိုးချဲ့ထားသော သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန် (သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန် တစ်လခွဲခန့်သည် အလွန်အဖြစ်များသည်) ထုတ်ကုန်သည် ဖောက်သည်ထံရောက်ရှိသည့်အခါ မကြာခဏ ထုတ်ကုန်ပျက်ကွက်မှုများ ဖြစ်စေသည်။၎င်းသည် နျူကလိစ်အက်ဆစ်ဓာတ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းအများစုကို ဒုက္ခပေးခဲ့သည်။
PCR ဓာတ်ပစ္စည်းများအတွက် Lyophilized နည်းပညာသည် Novel Coronavirus nucleic acid detection reagent ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
lyophilized PCR ဓာတ်ပစ္စည်းများကို အခန်းအပူချိန်တွင် သယ်ယူ သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရုံသာမက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရည်အသွေး ပြဿနာများကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်၊ ဓါတ်ကို lyophilizing သည် ပို့ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Lyophilization သည် အရည်တစ်မျိုးကို အစိုင်အခဲအနေအထားအဖြစ် အေးခဲစေပြီး၊ ထို့နောက် လေဟာနယ်အခြေအနေအောက်တွင် ရေခိုးရေငွေ့များကို ခွဲထုတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။အခြောက်လှန်းထားသော solute သည် တူညီသောဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ကွန်တိန်နာထဲတွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။သမားရိုးကျအရည်ဓာတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Liming Bio မှထုတ်လုပ်သော lyophilized Novel Coronavirus နျူကလိယအက်ဆစ် ထောက်လှမ်းသည့် ဓာတုပစ္စည်း အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိပါသည်။
အလွန်ပြင်းထန်သော အပူတည်ငြိမ်မှု-56 ℃ တွင် ရက်ပေါင်း 60 ကြာ ကုသမှုခံယူနိုင်ပြီး ဓါတ်ဆေး၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မပြောင်းလဲပါ။
ပုံမှန်အပူချိန် သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-အအေးကွင်းဆက်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ အလုံပိတ်ခြင်းမပြုမီ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားရန် မလိုအပ်ဘဲ အအေးသိုလှောင်မှုနေရာကို အပြည့်အဝ လွှတ်ပေးပါ။
အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်သည်-အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ lyophilizing၊ စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုမလိုအပ်ဘဲ၊ အင်ဇိုင်းကဲ့သို့ မြင့်မားသော viscosity ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း။
ပြွန်တစ်ခုတွင် Multiplex ပစ်မှတ်များ-ထောက်လှမ်းခြင်းပစ်မှတ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇကိုရှောင်ရှားရန် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ORF1ab ဗီဇ၊ N ဗီဇ၊ S ဗီဇတို့ ပါဝင်ပါသည်။မှားယွင်းသောအနုတ်လက္ခဏာကို လျှော့ချရန်အတွက်၊ နမူနာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက် ဆေးခန်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လူသား RNase P ဗီဇကို အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။
PCR IFU USA EU
ယခင်- SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Rapid Test
နောက်တစ်ခု: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (နှာခေါင်း)
SARS-CoV-2 နှင့် Influenza A/B Multiplex Real-...
SARS-CoV-2 Ant အတွက် Dual Biosafety System Device...
SARS-CoV-2 နှင့် Influenza A အတွက် စနစ်ကိရိယာ...
Novel Coronavirus 2019 Ncov, Covid-19 စစ်ဆေးခြင်းအတွက် Coronavirus, Covid-19 အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ, ပဋိပစ္စည်းစမ်းသပ်ကိရိယာ, Cryptococcal Antigen စမ်းသပ်မှု, လူ့ Coronavirus Igm/Igg Antibody စမ်းသပ်မှု,